Let's welcome Daw Aung San Suu Kyi to SF Burmese Community: Notice of closing of Sign-Up Form
Notice of closing of Sign-Up Form
စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂၊ မနက် ၉ နာရီ မှ နေ့ ၁၁ နာရီ အထိ ကျင်းပမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လိုတဲ့ ဧည့်သည်များ စာရင်းတင်သွင်းမှုကို ယနေ့ည စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၂ ညသန်းခေါင်ယံ အချိန်မှာ ပြီးဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ ဧည့်စာရင်းတင်သွင်းသူများကို ဆက်သွယ်ခြင်း၊ တက်ရောက်မည့်ဦးရေ အတည်ပြုခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ဖိတ်စာ (သို့မဟုတ်) ဧည့်လက်မှတ်များ ပေးပို့ခြင်းတို့ကို ဖိတ်ကြားရေးအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် စာရင်းသွင်းထားသူများနှင့် စုံစမ်းလိုသူများက အောက်ဖော်ပြပါ မြို့နယ်အလိုက် ဖိတ်ကြားရေးကိုယ်စားလှယ်များကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ အီးမေးနဲ့ ပေးပို့လိုပါက suu-SF-contacts@moemaka.info သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်ရေး အလုပ်အဖွဲ့ကိုယ်စား ဖိတ်ကြားရေးကော်မီတီ
Attention to individuals and organizations interested in attending the event "Daw Aung San Suu Kyi and San Francisco Bay Area Burmese Community Meeting (29th September, 2012,9AM to 11 AM)"
The Sign-Up Form will be closing on 12 mid-night PST time.
The Guest Relation Committee of Event will be contacting the persons and groups who have signed up to the form. We will be doing the process of verifying, confirming, and compiling number of guest list. Then we will be planning to deliver the "Invitation" or "Ticket" to the confirmed guests.
For all concerned persons and groups who have signed up to the form can respectively contact or inquire to the assigned representatives according to residing city or town. If you want to contact by email, please do so by using this SUU-SF-Contacts@moemaka.info .
Guest Relation Committee on behalf of Event Work Force
List of Guest Relation Representatives by area
၁။ ကိုမောင်ရစ် (တာဝန်ခံ)(Technology Team)
၂။ ကိုကျော်မင်းဦး (တာဝန်ခံ)
၃။ ကိုကျော်သူရ (တာဝန်ခံ)
၄။ ကိုဇာနည် (Technology Team)
၅။ ကိုမိုးကျော် (Technology Team)(သုံးရောင်ခြယ်)
၆။ ကိုတိုးလွင် (အထွေထွေ)
၇။ ကိုစံလင်း (ဖရီးမောင့်)
၈။ ကိုနိုင်ဝင်း (South Bay)
၉။ ဒေါ်ဌေးဌေးကြည် (South Bay)
၁၀။ ကိုထွန်းမြတ်ဦး (အထွေထွေ)
၁၁။ ကိုစိန် (ဖရီးမောင့်)
၁၂။ ကိုကျော်နိုင် (ဥက္ကလံ)
၁၃။ ကိုဂျေဆင် (ဖရီးမောင့်)(Technology Team)
၁၄။ ဦးစိန်ထွန်း (ဘေးတောင်ပိုင်း)
၁၅။ ခင်သီရိနန္ဒာစိုး (ဆန်ဖရန်)
၁၆။ ကိုမိုးကျော်(ဧရာဝတီ) (Technology Team)
၁၇။ ကိုစိုးမိုး (ဖရီးမောင့်)
၁၈။ ကိုညီထွေးခိုင် (ဆန်ဖရန်)
၁၉။ ကိုဇယံဓ (west bay)
၂၀။ မကလျာ (north bay)
၂၁။ ကိုဇာနည်မောင် (ဥက္ကလံ)
၂၂။ မဇာခြည်မြင့်အောင် ( west bay)
၂၃။ Mary Nicely (Berkeley)
၂၄။ မချမ်းမြအေး (ဥက္ကလံ)
၂၅။ ကိုဝေဖြိုး (San Jose)
၂၆။ ကိုကျော်ဝင်း (ဖရီးမောင့်)
၂၇။ ကိုချိူဦး (ဖရီးမောင့်)
၂၈။ မနိုင်ခင်မြင့် (east bay)
Posted by Maung Yit at 11:54 PM